Mepụta Ule ngwa ngwa na Nyochaa | Martech Zone
Mgbe inyocha ụfọdụ ezigbo oge alerter taa na akụrụngwa ahịa maka onye ahịa anyị, Right On Interactive, Marty Thompson bịara na njikọ njikọ saịtị nyocha a na-akpọ nyochaa. Ọ bụ saịtị nnwale dị oke ọnụ nke nwere ọtụtụ atụmatụ yana ihu dị mfe, na-enweghị nghọta maka ị nweta atụmatụ gị, saịtị na nhazi gị na ịnwale nzaghachi.
Nke a bụ nyochaa nyocha vidiyo:
Nyochaa nwere usoro nyocha ndị a dị:
Pịa Ule - Hụ ebe ndị ọrụ pịa dabere na ajụjụ.
Uche Uche - Chọpụta ihe ndị mmadụ na-echeta.
Ọnwale Ọnọdụ - Muta otu ndi mmadu si ele ihe n’ile anya.
Nnwale Mmasị - Gosi ihuenyo abụọ ma jụọ ndị ọrụ ịhọrọ.
Nyocha Annotate - Ka ndị ọrụ tinye ndetu na nseta ihuenyo gị.
Ule nyocha - Jụọ ndị ọrụ ihe ụfọdụ pụtara ha.
Multi-Page Pịa Ule - Hụ ebe ndị ọrụ pịa na usoro nke ihuenyo.
Ejikọtara Ule - Tinye ọnụ nyocha dị iche iche ka ọ bụrụ otu usoro.
N'ihe na-erughị $ 30 kwa ọnwa, Nyochaa na-enye gị ohere ịmepụta ule ngwa ngwa, kesaa ule ahụ wee nweta nsonaazụ - ịkekọrịta ha site na Twitter, Facebook ma ọ bụ site na URL ndị ọzọ, wee nyere gị aka ịghọta ma mee mkpebi na mfe ọgụgụ, mkpesa a na-ahụ anya.
Tags: ule uleimewe nzaghachigbawara n'etiti uletestingngwaọrụechiche onye ọrụngwá ọrụ weebụ